Home News Dhaqdhaqaaqyo Ciidan oo lagasoo warinaayo Gobolka Hiiraan
Dhaqdhaqaaqyo Ciidan oo lagasoo warinaayo Gobolka Hiiraan
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay howlgallo qorsheysan ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolka Hiiraan.
Ciidamada guutada 22aad ee qeybta 27aad CXD ayaa howlgalka waxa ay ka wadaan deegaanada hees iyo orotan ee gobolka Hiiraan halkaas oo shalay dagaal culus uu ku dhexmaray Al-Shabaab iyo Ciidamada Dowladda.
Saraakiisha qeybta 27aad ee CXD ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka uu yahay mid deegaanadaas looga saarayo Al-Shabaab,isla markaana ay sii wadi doonaan howlgallada.
Shalay barqadii ayaa kolonyo uu la socday Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar(Dabageed) waxaa lagu weeraray deegaanka orotan xilli ay kusii jeedeen tuulooyin hoostaga degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan.
Previous articleDowlada Soomaaliya oo ka hadashay dil Muqdisho loogu geeystay mid ka mid ah shaqaallaha
Next articleXildhibaan Jeesoow oo afka furtay”Qaraxyada maxaa looga adkaan la’yahay”
Uhuru Kenyatta oo shir gudoomiyay kulan deg deg ah oo looga...